Bisha Ganacsi ee Caalamiga ah waxay bixisaa tababar bilaash ah, taageero ganacsiyada yaryar - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Billaha Ganacsi ee Caalamiga ah wuxuu bixiyaa tababar bilaash ah, taageero ganacsiyada yaryar
Billaha Ganacsi ee Caalamiga ah wuxuu bixiyaa tababar bilaash ah, taageero ganacsiyada yaryar
Ku dhowaad 50 fadhiyada khadka tooska ah ee internetka ayaa ujeedkoodu yahay inay ka caawiyaan ganacsiyada yaryar bilawga iyo dib u bilaabista, xoojinta isbeddelka taariikhiga ah ee sameynta ganacsi cusub inta lagu jiro hoos u dhaca dhaqaalaha.
OLYMPIA, WA - Sida laga soo xigtay Xafiiska Tirakoobka Mareykanka, bilowga ganacsiga cusub ayaa kor u kacaya 8% guud ahaan sanadkan, iyo koror 25% ah qeybta seddexaad ee halkan Washington - 23,611 ee 2020 marka la barbardhigo 17,963 2019 sanadka seddexaad - kaas oo ayaa si gaar ah muhiim u ah marka la eego cudurka faafa ee COVID-19. Waa run in ganacsiyada yar-yar ay yihiin mashiinka dhaqaalaha Mareykanka, gaar ahaan xilliyada hoos u dhaca ku yimaad dhaqaalaha marka ay u ekaato koror u dhigma ganacsiga (Wargeyska Dhaqaalaha iyo Istaraatiijiyadda Maareynta).
Gov. Jay Inslee toddobaadkan naadiyey Nofeembar Ganacsiga Caalamiga ah ee bisha ee Washington, wuxuu bilaabayaa ku dhowaad 50 shabakadaha internetka iyo tababaro dalbasho ah inta lagu gudajiro bisha Nofeembar si looga caawiyo dadka inay bilaabaan ganacsiyo cusub ayna ka caawiyaan milkiilayaasha ganacsiga hadda inay udub dhexaad u noqdaan, dib u dhisaan ama ay si ammaan ah dib ugu bilaabaan da'da COVID-19.
Bisha Washington ee Global entrepreneurship Bisha waxay soo koobi doontaa mowduucyo fara badan oo loogu talagalay in wax looga qabto caqabadaha waaweyn ee ganacsiyada ay hadda wajahayaan iyo sannadaha soo socda.
"Bisha Ganacsi ee Caalamiga ah waa mid ka mid ah siyaabaha badan ee Ganacsigu u shaqeynayo si loo hubiyo inaan helno dib u soo kabasho dhaqaale oo ballaaran, sinnaan leh, oo aan cidna uga harin," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Washington Lisa Brown. Ganacsiyada yar-yar waxay xoojinayaan bulshada, iyagoo siinaya dhaqaale kala duwan oo loo dhan yahay oo kobciya xaafadahayaga, dhaqanka hal-abuurka ah iyo degmooyinka ganacsiga waddooyinka waaweyn.
Maaddaama dadku raadinayaan fursado cusub oo xagga dhaqaalaha ah, Ganacsiga ayaa soo sheegaya koror baaxad leh oo ku yimid baahida loo qabo tababarka iyo waxbarashada ganacsiga. Waxqabadyada bishaan, oo ay weheliso Akadeemiyad Ganacsi oo cusub oo bilaabaysa Nov. 2 on MyStartup365.com, waxaa loogu talagalay inay bixiso barnaamijyo casri ah oo bari doona ganacsatada mustaqbalka iyo milkiileyaasha ganacsiyada yaryar ee jira xirfadaha lagama maarmaanka ah ee ay u baahan yihiin si loogu guuleysto sanadaha soo socda.
Tani waa sanadkii lixaad ee Waaxda Ganacsi ay hogaamin doonto kaqeybgalka gobolka ee dhacdooyinka ay soo bandhigto dabaaldegga sanadlaha ah ee Toddobaadka Hal-abuurnimada Caalamiga (Nofeembar 16-22, 2020). Sanadkii la soo dhaafay, waaxdu waxay si wada jir ah u martigelisay iskuna dubariday in ka badan 250 dhacdooyin qof-qof oo ka dhacay gobolka oo dhan. Aafada iyo welwelka nabadgelyada guud waxay ku dhiirrigelisay hay'adda inay si ka duwan sidii hore uga fikirto sannadka 2020. Koorsooyinka khadka tooska ah waxaa casharo ka bixin doona khubaro hoggaamineysa oo ka kala socota dhowr hay'ado dowladeed iyo heer federaal ah iyo kuwa gaarka loo leeyahay.
Halkan ka hel liis dhammaystiran oo ku saabsan dhacdooyinka Bisha Ganacsi ee Caalamiga ah halkan: http://bit.ly/wa-gem.
Ganacsiyada yaryar ee raadinaya caawimaad kale ayaa sidoo kale laga yaabaa inay booqdaan Ganacsiga bogga 'COVID-19 Kheyraadka' ganacsiga
← Guddiga Hawlaha Dadweynaha Washington wuxuu oggolaaday $ 17.8 milyan oo loogu talagalay dhismaha khadka ballaadhista ee gobolka oo dhan Xogta dib u soo kabashada waxay muujineysaa fursad iyadoo lagu jiro dhibaatada joogtada ah ee qaybaha iyo kooxaha muhiimka ah →